Ku saabsan lacagta hawlgabka KPA - KPA Pension
Ku saabsan lacagta hawlgabka KPA
Waxanu nahay shirkada lacagta hawlgabka ee degmada iyo gobolka
Lacagta Hawlgabka ee KPA waa shirkada lacagta hawlgabka ee ugu horreysa qaybta degmada. Waxanu kalsooni ku helnay inaanu daryeelno lacag hawlgab oo loogu talogalay malaayiin dad ah.
Marki aanu aasaasmanay 1922 waxanu lahayn 400 oo qof oo caymis ku jira dhinaca kow iyo toban magaalo. Ilaa iyo markaasi hawshayadu way labanlaabmatay. Maanta waxanu daryeelnaa lacagta hawlgabka loogu talo galay qiyaastii hal milyan oo ah shaqaalo degmo iyo gobol oo waxaanu daryeelnaa maamulka lacagta hawgabka loogu talogalay boqolkiiba 80 ka mid ah degmooyinka Iswiidhan iyo dhammaan gobolada.
Ma aaminsanin jaritaano deg-deg ah, balse waxanu goor kasta ku shaqaynaa aragti dheer. Sidaas darteed waxanu lacagtaada hawlgabka u dhignaa si ay u keento ka macaash wanaagsan oo aragti dheer ku salaysan.
Waxa boqolkiiba 60 na leh Folksam iyo boqolkiiba 40 oo ah Degmooyinka iyo Gobolada Iswiidhan.
Mustaqbal raagaya oo loogu talogalay dadka iyo deegaanka
Muuqaalkayaga anshax waa aasaaska hawshayada. Tani waxay tahay in aananu ka eegin oo keliya dhinaca aragtida dhaqaale shirkadeed, balse xitaa aanu qaadano mas’uuliyada buuxda ee dhigisyadayada. Waxa goor kasta loo dhigaa si waafaqsan shuruudahayaga dhigista ee anshaxa.
Maanta waxanu maamulnaa qiyaasti 85 bilyan oo karoon. Tani waxay na siisaa fursada inay bulshada si aragti dheer raad ugu yeelato. Qaabab kala duwan ayaanu ugu shaqaynaa mustaqbal raagaya, taas oo ay ka mid tahay dhigistayada anshaxa iyo shaqadayada dhinaca mas’uuliyad qaadasho bulsho. Waxa kale oo aanu u shaqaynaa in shirkadaha aanu maalgashanayno ay qaataan mas’uuliyadooda loogu talogalay dadka iyo deegaanka.
Dhigista anshaxa leh
Dhigista lacagtu waxay leedahay awood weyn oo raad ku yeelasho. Waxay tusaale ahaan caawin karaan in la sii wanaajiyo xuquuqda bani’aadamka iyo deegaanka iyadoo loo maamulayo si anshax leh.
Waxanu raad ku yeelanaa in shirkaduhu ay sii wanaagsanaadaan. Waxanu iyadoo loo sii marayo dhigisyadayada aanu si fir-fircoon raad ugu yeelanaa in shirkaduhu mas’uuliyad ka qaataan deegaanka iyo xuquuqda bani’aadamka. Tusaale waxa ah in mulkiile ahaan shirkadaha lagu dhiiri-geliyo inay wax soo saarkooda tamar ka baddelaan shidaalka qadiimiga ah una baddelaan tamarta la cusboonaysiin karo. Tusaalooyin kale waa in loo hawlgalo arrimaha sinnaanta iyo xuquuqaha shaqo ee aasaasiga ah. Waxanu u shaqaynaa inaanu raad ku yeelano shirkadaha dhinacyada xuquuqda bani’aadamka, deegaanka iyo musuq-maasuqa.
Waxanu si buuxda u diidnaa noocyada hawlaha qaarkood. Ganacsiga iyo shirkadaha qaarkood waa laga saaraa hawlahayaga maalgelinyo iyadoo aan loo eegin si kastoo ay u wanaagsantahay shaqadooda deegaanka iyo deegaanka shaqo. Waa laga saaraa marka hawshoodu ay ka soo horjeedo mabda’yada anshaxa oo ay waxyeelayso dadka iyo deegaanka, tusaale ahaan wershadaha hubka, tobaakada, khamaarka iyo khamriga.